Qaadashada Nidaamka Cusub ee Aasaasida dhaqameed
Warbixinnada sanadlaha ah waa bahal la yaab leh oo ku jira da'da digital. Waxay ahaayeen hal mar oo ah saxiixa sheekada. Da'da 24/7/365 shaashado badan, wareega wada-xiriirka ah ee wareega ah, qaar xiriiriyayaasha aasaasiga ah su'aashooda qiimeeyo.
Markii la gaadhay waqtigii la qorsheyn lahaa warbixinta sanadlaha ah ee McKnight, waxaan maanka ku hayay horumarkan oo weli diyaar uma ahayn inaan ka tago dhaqanka gabi ahaanba. Waxaan go'aansaday inaan tijaabiyo nooc ka duwan. Sannadkan, McKnight waxa uu tijaabiyey a warbixinta sanadlaha ah ee digital-koowa taas oo doonaysay in ay noqoto mid faa'iido leh iyo ujeeddadeedu u jeeddo sida ugu macquulsan.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah hababka ugu fiican ee lagu soo bandhigay warbixinta. Qaar badan oo ka mid ah aragtidooda ayaa laga soo xaaqay kheyraadka sida Shabakadda Xiriirka, Spitfire, Frank, Yaab, Goodwin Simon Isticmaalka Istaraatijiyadda, Machadka Farsamada, Hunch for Good, Shabakada Wargeyska, iyo George Lakoff, iyo kuwo kale. Waan ka mahdinayaa ururadan, iyo sidoo kale lamaane nala wadaag Pollen Midwest.
Hababka ugu Fiican ee Looga Hadlo Xiriirrada Dumarka
Kor u qaad aragti wanaagsan ee waxa suurtagal ah. Cilmi-baarista ayaa muujinaysa in arrimahan ay si wax ku ool ah u dhiirrigeliyaan rajada iyo ficilka marka ay deggan yihiin dhibcaha akhriska. Isticmaalka mawduuca Awoodda, waxaanu u leenahay shaqsiyaadka iyo beelaha sida wakiillada isbeddelka halkii dhibbanaha. Sida Qaabdhismeedku dhigo, waxaan u baahanahay inaan maqalno wax badan oo kusaabsan Nafaqada yar-yar ee Kaadi-yar iyo Kaadi Yar Yar. Haa, si taxadar leh u baadha dhibaatada ugu weyn ee bulshadeed iyo in la cabo alaarmiyeyaashooda. Oo waa in aan ku bixinnaa wakhti intee le'eg oo sharraxaya sida aan u bilaabi karno horumar.
Adeegsiga waxa loo yaqaan hanti-ku-saleysan, waxaan ku tusi karnaa dadka awoodda iyo waxa ay awood u leeyihiin in ay guuleystaan inkastoo ay jiraan caqabado. Qaado arrinka sida looga hortago nafaqo-darrada caruurnimada ee Afrika marka la eegayo miisaanka. Mawduucuna wuxuu udambeynayaa murugo la siiyey malaayiin carruur ah oo qaba cuduro laga hortegi karo oo la xidhiidha yaraanta fitamiin A. Waxaan dooranaynaa, halkii, si aan u sheegno sheekada oo ah cilmi-baare ku-taliyayaal Uganda ah oo lagu badbaadinayo fitamiin A oo ku yaala cuntada caadiga ah. Sidaa daraadeed, diiradda ayaa u wareegeysa waxa suurtagal ah halkii laga yaabo inay u muuqato mid aan macquul ahayn.
Isticmaal luqad sahlan, oo cad. Maxay "dhisidda karti-xirfadeedka" ama "kalluunka khayraadka" ama "dhaqaalaha guud" dhab ahaantii? Kaliya dad yar oo dhaadheer ah ayaa jecel buqcadahaas. Si aan ugu martiqaadno dad badan oo kala duwan wadahadalka, waxaan yareynaa jargon iyo cinwaanada yar-yar marka ay suurtagal tahay. Inkasta oo isgaarsiintu ay tahay mid si toos ah loogu bartilmaameedsado khabiirada qaybaha, waa in aan xusuusanno in la dhexgaliyo dhagaystayaasha caqliga leh ee dhinacyada iyo dhinacyada nolosha ay muhiim u tahay horumarinta horumarka.
Soo bandhig sirta la qaban karo. Waxaanu ku jirnaa wakiilada isbeddelka ah ee soo jeedinaya xalal cusub oo cusub si ay kuwa kale u kobcaan horumarka. Waxaan u sheegi karnaa sheekooyinka waxa cilmi-bulsheedku u yeeraan is-qabad wanaagsan, ama tusaalayaal dadka ka caawiya helitaanka siyaabo lagu xalliyo xalalka xitaa marka ay isku midka yihiin sida kuwa kale. Waxaan rabnaa magaalooyinka iyo hoggaamiyeyaasha gobollada dalka oo dhan si aan u maqalno caddaynteena sida farshaxanada dib u soo nooleyn karaan magaalooyinka yaryar. Waxaan rabnaa madaxda sare ee shirkadaha inay tixgeliyaan hab cusub oo lagu hagaajin karo silsiladahooda suuqyada sida cilmi baarista ah ee hadhuudhka Kernza® horumarinta.
Noqo mid munaasib ah iyo waqtigana. Warbixinteena sanadlaha ahi waxay ku qanacday qiimaha aan ku laheyn barta muhiimka ah. Tusaale ahaan, waxaanu muujinaynaa jiil cusub oo cusub oo ka soo jeeda Reer Minnesota iyo Appalachia si loola dagaallamo fikradaha qalqal ee bulshooyinka miyiga ah. Afartan sano ee aan maalgelinno aasaasiga ah neuroscience cilmi-baaristu waxay markhaati ka tahay inta aan qiimeeyno kalsoonida sayniska. Our waxbarasho sheekadu waxay tilmaamaysaa hodanka dhaqaalaha iyo dhaqaalaha ee hodanka ah ee muhaajiriinta iyo qaxootiga, taas oo ah sababaha ugu badan ee lagu fahmi karo deriskeenna cusub. Warbixinta ayaa kor u qaadeysa saameynteena la aamini karo si sahal ah oo aan si daacad ah u muujinayno qiimeynteena ficilka.
Inay abuuraan arin adag. Sheekooyinka shakhsi ahaaneed waxay muujin karaan sida aragtiyaha, siyaasadaha iyo nidaamyada kala duwan ay ula xiriiraan nolol maalmeedka caadiga ah ee dadka caadiga ah. Way adkaan kartaa in qofku maskaxda ku dhejiyo caqabado badan oo ka mid ah bulshada dhuxusha ku tiirsan oo u baahan in loo wareejiyo dhaqaale kala duwan. Waqti ku qaad wakhti qaali ah ganacsade taasoo keentay shaqooyin daraasiin ah si ay u noqdaan Renick, West Virginia (pop 210), waxaanu helaynaa dareen ka fiican halka laga bilaabo. Ama, tixgelin la'aanta khasaare wayn guryaha la awoodi karo Minneapolis, arrin deg deg ah oo aan la taaban karin. Kharashka bani'aadamku wuxuu noqonayaa mid cadcad kadib markii hooyadu sharaxday sida ay ugu soo noqotid shaqada gurigeeda si ay ugu dillaacdo qashin qubka iyo foornada jabtay dhimashada jiilaalka.
Kicin waqti dheeraad ah si aad u qaybiso content. Waxaan si ula kac ah u qorsheynay waqti dheeri ah iyo tamar xagga emaylka iyo howlgelinta warbaahinta bulshada si aan u beegsano dhagaystayaasha inta aan ka helnay warbixinno sanadeedkii hore. Istaraatiijiyadaha content waxay talo ka bixiyaan saamiga 40/60 inta udhaxeysa waqtiga lagu bixinayo abuuritaanka iyo kor u qaadida. Waa saami inteena badan looga helo cabsi. Sida kaliya ee lagu dhammayn karo wax kasta oo u dhawaa taas waa in la soo saaro alaabooyin isgaarsiin oo yar isla markaana loo daadago kuwa ka hooseeya heerka saamaynta. Xanuun ahaan sidii ay ahayd, waxaan go'aansanay go'aano adag goor hore si aan u daadinno qaar ka mid ah howlaheena hoose ee saameynta leh si aan fursad ugu helno saameyn weyn meel kale. Ujeeddadeyda: Haddii aysan horumarin howsha, kaliya ha sameynin.
Maxay Tahay Isgaadhsiinta McKnight?
Sannadka soo socda, McKnight wuxuu ku biiri doonaa tirada sii kordhaysa ee aasaasiga ah ee aan soo saarin warbixino sanadle ah. Xaqiiqdu waxay tahay, waxaan u baahannahay inaan sheegno sheekadayada oo aan hirgelino hababka isgaarsiinta ugu fiican ee ku saabsan dhammaan meheradaheena sanadka oo dhan. Si loo gaadho tan, waxaan abuuray boos cusub oo farshaxan oo dijital ah, iyo website cusub oo dib loo cusbooneysiiyay ayaa sidoo kale hoos u dhacaya foosha. Waxaan ku qanacsanahay falanqeeyayaasha xiisaha dadwaynaha waxay kobcin karaan horumarka ku saabsan sababaheena iyaga oo xakameynaya sii deynta iyo warbixinnada loo soo saaro dhaqan ahaan. Waxaan u baahannahay inaan maalgashano waqtigeena iyo tamarta halkii ay ka heli lahaayeen istaraatijiyado fara badan.